ထိုင်း BL ဇာတ်လမ်းပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့ အတောင့်တဆုံးဆန္ဒကတော့ BL အတွဲတွေရဲ့ စီးရီးသစ်တွေကို များများကြည့်ရဖို့ပါပဲ။ EarthMix အတွဲလေးကိုလည်း A Tale of Thousand Stars ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ်စီးရီးသစ်မှာ ထပ်မံ‌ပေါင်းဆုံစေချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မှာတော့ GMMTV ကနေ EarthMix အတွဲရဲ့ ၂၀၂၂ ပရောဂျက်စီးရီးသစ် “Cupid’s Last Wish” ကို ချပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီစီးရီးလေးကတော့ အရာရာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ပြီး အေးဆေးတဲ့ Korn (Earth), လက်ရဲဇက်ရဲရှိပြီး စွာတေးလန်လေးဖြစ်တဲ့ Win (Mix) နဲ့ Win ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ Lin (Ployshompoo) ကြားက ထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ။ Korn နဲ့ Win က အရင်ကတည်းက နွေးထွေးတဲ့သံယောဇဉ်‌တွေ ရှိခဲ့ကြပေမဲ့ Win ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါးသွားပြီးနောက် အထင်လွဲမှုအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Win အဖေက ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ရှယ်ယာတွေကို Korn အား လွှဲပေးခဲ့တာကြောင့် ဒီအမွေတွေကိုလိုချင်တဲ့သူဆိုပြီး Win တစ်‌ယောက် အထင်မှားကာ အမြင်မကြည်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ပြဿနာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် Win နဲ့သူ့ညီမဟာ မိုးသည်းတဲ့ ညတစ်ညမှာပဲ ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး ဝိဉာာဉ်ချင်းလဲသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Korn ဟာ မောင်နှမနှစ်‌ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ရင်း ယောက်ျားလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲက Lin ကိုပဲ ချစ်သွားမိတာလား? နဂိုကတည်းက သံယောဇဉ်တွယ်နေတဲ့ Win ကိုပဲ ချစ်သွားမိတာလား? ဆိုတာကို ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းစွာကြည့်ရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကဆန်းသစ်တဲ့အပြင် အဓိကဇာတ်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့ EarthMix အတွဲကလည်း အပိုအလိုမရှိ မျက်လုံးအကြည့်ကမှအစ အသက်ဝင်အောင် တွဲဖက်ညီလွန်းတာကြောင့် နာမည်ကြီးတဲ့ အတွဲတစ်တွဲပါ။ ၂၀၂၂ ထဲမှာ ထွက်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းအသေးစိတ်ကတော့ ထွက်မလာသေးပါဘူး။ EarthMix စုံတွဲရဲ့ Comeback စီးရီးသစ်ကို မျှော်နေကြသူများ မလွတ်တမ်းအားပေးကြဖို့ အားခဲထားကြပါတော့နော်။
Next ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ​်ကြောင့် 2021 MAMA ပွဲကို တက်​ရောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်​တော့တဲ့ BTS »
Previous « အလွန်အမင်းပူပန်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ Jimin
Fan တွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုအရ IQIYI က ချီးမြှင့်တဲ့ Q AWARDS 2021 ဆုရစာရင်း